Maluuda oo Kudhaw inuu Uwareego Kooxda Santoos Baraziliga ah - jornalizem
Maluuda oo Kudhaw inuu Uwareego Kooxda Santoos Baraziliga ah
Sida ey umuuqato laacibka Faransiika ah Falran Maluuda Weerarka Chelsee ee London oo ku qaraar goostay inuu kubiiro Cayaaraha iyo naadiyada Baraaziil.
Akhbaarta ugu danbeysa ayaa sheegaysa iney jiraan Wada hadalo udhaxeeyo Laacibka iyo Naadiga Saantoos.
Sida loo ogaa maalmihii ugu danbeysay in laacibkan doonayey naadiga Fasko Da Gama oo naadigu Hamigiisa aheed Laacibkan Laakin sida nagu soo gareyso Wararka ugu danbeya ayaa xaqiijinaya in Laacibkan Nadiga Brazil Santos Doonayaan oo wada hadal ka dhaxeeyo.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynaha Naadiga santoos Alfaaro Reberi ayaa dacwadan usoo jeediyey Laacibka Faransiiska Maluuda Naadiga uu ku jiro Niimaar iyo Ganasoo.
lama hubo si rasmi ah Macaashka uu laacibkan qaadan doono waayo macaashka uu dalbaday ayaa ah 250kun oo lacagta yuuro ah taa ayaa kaliftay in Masuuliinta naadiga iyo Ninka wakiilka ka ah Kulan wada dalbadaan.
Maaluuda oo jira 32 Sano ayaa ka dhax muuqday Naadiga Chelsee ee reer London isagoo laqaaday Koobka reer yurub ee nadiyada isagoo ciyaaray 11 cayaar Coobka Egland wax soo sarkiisana maheen mid nidaamsan .